ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများ၊ | JAPAN DISCOVERY
မူလနရော » ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများ၊
Updated: 2016-11-11 09:52
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ဆုမိရောရှိမျိုးဆက်ဘုရားရဲ့ရှေးအကျဆုံး ဘုရားကျောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရှေးခေတ်အခါက ဟကတပင်လယ်အော်တွင် ပင်လယ်ရေကြောင်း၊ အာကာသကောင်းကင်ကို စောင့်ရှောက်နေသော ဘုန်းတော်ကြ...
Updated: 2016-10-17 15:24
လူသိနည်းတဲ့ဖုခုအိုကက ပါဝါစပေါ့( ခရှိနတ်ကျောင်း)
ဂျပန်နိုင်ငံ ကျူရှူးပြည်နယ် ဖုခအိုကမြို့ အရှေ့ပိုင်း တွေ တည်ရှိသော ခရှိ နတ်ကျောင်း ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကျောင်းတွင် ကိုးကွယ် ထား တဲ့ နတ် မင်း ကြီးကတော့ ချူးဆဲစွတ် ဘုရင်နဲ့ ရှင်းဂု ဘုရင် တို့ ပဲဖြ...
Updated: 2016-10-06 15:24
တိုယိုတာ ဟိမဲ နတ်ဘုရားကျောင်း
ရေပူစမ်းဒေသ ရဲ့ အလယ် ဗဟိုမှာ ရှိ တဲ့ ( တိုယိုတာ ဟိမဲ နတ်ဘုရားကျောင်း ဟာ ) အရင် တုန်း ကတည်း က ပင်လယ်စောင့်နတ်ဘုရား ( ၀ါ ) ရေ နတ်ဘု ရား လို့ ခေါ် ဆို ကာ ကိုးကွယ် ဆည်းကပ်လာတဲ့ နေရာ တစ်ခု ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထ...
Updated: 2016-10-03 16:14
၇၁၇ ခုနှစ် Gyoki ဘုန်းတော် ကြီး က တော ထွက် ခဲ့ တဲ့ တောင် ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၃၀၀ နှစ် ကြာအောင် သမိုင်း ရှိတဲ့ Daikozenji ဘုရားကျောင်း ဟာ နွေဦးရာသီ ကော ဆောင်း ဦး ရာသီ အတွက် ကော ပန်း အလှ ကြည့် နေရာ တစ်ခ...
Updated: 2016-09-21 09:49
ဖုခုဆုမိ ဘုရားကျောင်း ( နာဂစခိ )
လိပ် ပေါ် ကိုတက် ကာ မျက် နှာ မူနေတဲ့ အမြင့် ၁၈ မီ တာ ရှိကာအလေး ချိန် ၃၅ တန် ရှိ တဲ့ ကွမ်ရင်မယ်တော် ရုပ် ထုကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်း ကွမ် ရင် ရုပ်ထု ကြီး ကတော့ (နာဂစခိမှာ တည်ရှိကာ ) နာဂစခိ အနုမြူ...
Updated: 2016-09-15 15:51
ဖုကိုးဂျိ ဘုရားကျောင်း ကို အခြားး နာမည် နှင့် ( ခရမ်းရောင်ပန်း ကျောင်းတော် ) လို့ ခေါ် ဆို ပါတယ်။ ထို နာမည် အတိုင်း ပဲ နှစ်စဉ် ဇွန် လ အလယ်လောက် ရောက်ပြီး ဆိုလျင် အနီး တ၀ိုက် မှာ ခရမ်း ရောင်...
Updated: 2016-09-13 15:01
တာခဲအို နတ်ကျောင်း ကို အခြား အမည် ဂေါရှဒိုင်းမျော နတ်ဘုရားကျောင်း လို့ လဲ ခေါ် ဆို ကာ ဆာဂခရိုင် အတွင်း ရှေး အကျ ဆုံး နတ်ကျောင်း တစ်ဆူ ဖြစ်ပါသည်။နတ်ကျောင်းး ရဲ့ နောက်မှာ ဆို ရင် အလွန် ရှေး ကျ ကာ သက်တမ်...
Updated: 2016-09-13 13:35
တိုင်းကိုခု တဲရ ရုပ်ပွားတော်ကြီး( နိုင်ငံကြီး ဘုရား )
လွန်ခဲ့ တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၁၂၀၀ လောက်က ကိုးဘိုး လို့ခေါ်တဲ့ ဘုန်းတော်ကြီး က နိုင်ငံ လေး နိုင်ငံ သို့ တရားလှည့်လည် ဟော ရင်း နဲ့ လူသား တို့ ရဲ့ အကျိုး ကို မျှော် ကိုး ကာ တည်ထား ခဲ့ တဲ့ ရုပ်ပွားတော်ကြီး ဖြစ်ပ...
Updated: 2016-09-01 14:01
ဟီရခိခိ ( Hirakiki) နတ်ဘုရားကျောင်း
ဟီရခိခိ လို့ ခေါ် တဲ့ နတ် ဘုရာ ဟာ ရှေး အခါ က ငါး ဖမ်း သမား တို့ က သမုဒ္ဒရာ စောင့် နတ် မင်း ကြီး ဆို ပြီး ယုံ ကြည် ကိုးကွယ်ခဲ့ တဲ့ နတ်ဘုရား တစ်ပါး ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အထူး သဖြင့် ခရီး သွား နေစဉ် စောင့်ရှောက် ပေ...
Updated: 2016-08-30 14:08
ကိုမျိုးဇဲန်းဂျိ ဘုရားကျောင်း ကို ကာမာခူရာခောတ် လင်းဇိုင်း ဘုန်းကြီးကျောင်းတော်က ဘုန်း တော်ကြီး Tetsugyu Enshin က တည်ထား ခဲ့ တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Dazaifu Tenmangu ကို သွား တဲ့ လမ်းပေါ်မှာ တည်ရှိပြီး တိုရိအိ...